Ukuphononongwa kweStormGain ngoJanuwari 2022: Imirhumo yeQonga, ukusasazeka, kunye noMmiselo
Uphengululo lweStormGain: Imirhumo yeqonga, ukusasazeka, iiasethi zesiko kunye noMmiselo 2021
Uvavanyo lweStormGain 2021, Ngaba ujonga iqonga lokurhweba nge-cryptocurrency elibonelela ngamanqanaba aphezulu okunyusa? Ukuba kunjalo, unokufuna ukuqaphela ukusebenzisa iStormGain- ubuncinci kuba unokurhweba ngeemali zokukhuphela kunye nokunyuka ukuya kuthi ga kwi-200x.
Ngelixa kukho amakhulu amaqonga otshintshiselwano nge-crypto phaya, iStormGain icetyiswa kakhulu ngabarhwebi abanamava. Akunyanzelekanga ukuba ube yi-nerd ye-crypto ukuqonda eli qonga nangona lilungile kubahwebi bazo zonke iiseti zobuchule.
Nawuphi na umrhwebi ophumeleleyo uyazi ukuba elona thuba lakho lokuphumelela unezixhobo ezifanelekileyo, kwaye iStormGain ngokwenene ayidanisi malunga noku.
Kodwa, ngaphambi kokuvula iakhawunti kunye neqonga, singacebisa ukuba sifunde ngokunzulu uphononongo lweStormGain. Yonke into ofuna ukuyifumana-kubandakanya iifizi, amandla, ukhuseleko, iintlawulo kunye neekhomishini.
I-StormGain yenziwe nge-2019 kwaye izithatha njengeqonga lokuthengisa nge-cryptocurrency labarhwebi bazo zonke iimilo kunye nobukhulu. Ukuphakama kukufumana ukuthandwa phakathi kokutshintshiselana nge-crypto, kodwa izixhobo kunye nokuguquguquka kwenza iStormGain ibonakale kwisihlwele.
Amanye amaqonga anokudideka kubarhwebi abatsha be-crypto, kodwa iStormGain isebenze nzima ekwenzeni utshintsho lwabo lube yinto elula. Ngapha koko, thina kwi-Learn 2 Trade sikufumana kunzima kakhulu xa kuthelekiswa namanye amaqonga orhwebo nge-crypto aphuma phaya.
Ukuba ufuna ukuzama ukwenza ingeniso ekwehleni okanye ekukhuleni kwintengiso ye-crypto eyaziwayo, emva koko unokufumana iqonga lakho
Oku kuseta abasebenzisi ukuba bafumane amava othusayo, ngakumbi ukuba umtsha kwimeko. Eyona nto intle kunayo yonke, iStormGain ibonelela ngethotho yeempawu eziluncedo kunye nesimahla esiza kukugubungela kamva.
Iimveliso zeStormGain kwiSibonelelo
Nokuba usebenzisa iqonga lesikhangeli sewebhu okanye usetyenziso lweselfowuni- uyakubona ukuba iStormGain ineemveliso ezine eziphambili ezifumanekayo kubaxumi bayo.
Xa ubhalisile neStormGain, ezi mveliso zilandelayo ziyafikeleleka kuwe:
Ukutshintshiselana kwangoko: Shintsha i-crypto yakho ngokukhawuleza kwixabiso lentengiso.
Utshintsho rhoqo: Thengisa i-crypto yakho ngeentlobo zoku-odola eziphambili kunye nezixhobo ezintsonkothileyo.
Ukutshintsha kweMargin: (okanye ukurhweba usebenzisa ukuphindaphinda) ngokutshintshiselana ngomda urhweba nge-crypto ukuya kuthi ga kwi-200x.
Isipaji seCrypto: Ungathumela, ufumane okanye ugcine i-cryptocurrensets yakho apha-ngakumbi malunga noku kweli phepha.
Ezi mveliso zingundoqo zingasentla ziqinisekisa ukuba unazo zonke izixhobo ezifunekayo kunye neempawu zokurhweba ngee-cryptocurrensets ngendlela efanelekileyo.
Zeziphi iiperi zeMali ezinokuThengiswa?
Kanye njengeBitcoinCash / Bitcoin kunye neLitecoin / Bitcoin, kukho isixa esikhulu sezibini ekunikezelweni kwiStormGain.
Ezinye zezibini eziqhelekileyo ezithengiswayo zidweliswe ngezantsi.
IDASH / BTC (iDash / bitcoin)
I-BTG / USDT (i-Bitcoin igolide/ Ukutshintsha)
Njl / USDT (Ethereum Classic / Tether)
ZEC / USDT (iZcash / iTether)
I-ADA / i-USDT (iCardano / iTether)
Iiparitha ezintsha zedijithali ziyongezwa nguStormGain rhoqo, ke qhubeka ujonge umva.
Imirhumo kunye neMida kwiStormGain
IStormGain yenza ukuba kube lula ukubhalisela iakhawunti. Banemali ephantsi yokukhuphisana. Oku kuxhomekeke ekubeni zeziphi iiasethi zemali onqwenela ukurhweba ngazo.
Njengolunye utshintshiselwano oludumileyo lwe-crypto, iifizi zeStormGain zishiya indawo eninzi yokwenza inzuzo. Ngale nto engqondweni, siza kukubonelela ngemizekelo ethile. Ngale ndlela, ungazibonela ngokwakho ukuba loluphi uhlobo lwemirhumo omele ukulindela.
Zonke iifizi zichanekile ukusukela ngoJulayi 2021.
Kwiphepha elisezantsi, iStormGain ibiza ixabiso lekhomishini ephambili ye0.095%. I-BCH / BTC ibiza kancinci kwi-0.25%. Nangona kunjalo, kwisikimu esikhulu sezinto, oku kuyinyani kakhulu kukhuphiswano.
Njengomzekelo. Masithi ufuna ukurhweba i-10,000 BCH / USDT, oku kuyakubiza iiyunithi ezili-10 kwikhomishini. Ngekhomishini ye-0.095% kunye nobuncinci besayizi yotshintshiselwano ye0.0001 BCH.
Ukuba ufuna ukurhweba i-10,000 BCH / BTC, nangona kunjalo-oku kuyakuhlawula i-25 kurhwebo njengoko umrhumo wekhomishini uyi-0.25%
Ikhomishini yokutshintsha okuphakathi kwe-BCH / USDT, i-LTC / i-USDT, i-ETH / i-USDT, i-BTC / i-USDT yi-0.04% yokuthenga kunye ne-0.004% yokuthengisa.
I-StormGain yi-0% sasaza umrhwebi. Endaweni yoko, kuya kufuneka uhlawule umrhumo wekhomishini ukuya kuthi ga kwi-0.25% nge-odolo nganye. Njengoko kuphawuliwe ngasentla, tkuye kuxhomekeke ngokupheleleyo ukuba yeyiphi imali oyithengisayo kwaye isathathelwa ingqalelo iphantsi kakhulu.
Kusimahla ukufaka idipozithi kwiStornGain xa uxhasa ngemali iakhawunti yakho ngemali yedijithali. Idipozithi encinci efunekayo iya kuxhomekeka kwingqekembe oyikhethileyo.
Umzekelo, 1 USDT, 0.0002 BTC okanye 0.01 ETH. Ngomrhumo wokurhoxa we-0.01%, elona xabiso liphantsi lokuphuma kwemali kwiStormGain yi-50.0 USD, 0.0059 BTC kunye ne-0.3 ETH.
Xa kuziwa kwiidipozithi zekhadi lebhanki, uya kuhlawuliswa ikhomishini ye-5%. Kukho iidipozithi ezincinci ze-fiat nazo, kunye nemali exhomekeke kukhetho lwakho lwemali. Umzekelo, kukho idipozithi encinci ye-50 USD, i-EUR kunye ne-CHF, i-70 AUD, i-1000 CZK.
Kwakhona yimizekelo embalwa nganye nganye. Unokufumana yonke imirhumo kwiwebhusayithi. Ukuqhubela phambili kugqithiso lwe-SEPA, ikhomishini yokurhoxa yi-0.1% kwi-BTC kunye ne-ETH. Ukurhoxa okuncinci yi-150 ye-EUR kunye ne-SEPA, ubuninzi be-10,000 EUR.
Ukurhweba ngokuHanjisiweyo kweCrypto kwiStormGain
Ukuba ufuna ukuthengisa ii-cryptocurrensets usebenzisa amandla, emva koko iStormGain ibonelela ngezixhobo ezikumgangatho ophezulu zokuthengisa. Oku kumi kwisimangalo esimangalisayo se-200x kwiLitecoin, iBitcoin, iRipple, iBitcoin Cash kunye ne-Ethereum ukubala ezimbalwa. Ukubeka oku ngokwembono, oku kuthetha ukuba idiphozithi eyi- $ 100 eStormGain iya kuvumela ubungakanani obukhulu bezorhwebo ngama- $ 20,000.
Ukuba unomdla ngokukodwa kurhwebo oluxubileyo lwe-crypto, uyakufumanisa ukuba abathengisi abanjengoStormGain lolona khetho lufanelekileyo. Abanye babarhwebi beCFD abaziwa kakhulu kwihlabathi ngoku banikezela urhwebo lweeasethi ezixhotyisiweyo.
Nangona kufanelekile ukuba uqaphele ukuba imigaqo kunye neemeko zokunikezelwa ziya kwahluka kakhulu. Inyaniso yokuba iimarike zemali zitshintsha kakhulu zenza indawo efanelekileyo yokurhweba.
I-StormGain idale iqonga elinakho ukukwenza ukuba urhwebe ngokukhawuleza nangokulula, ngaphandle kokuchitha imali yakho oyigcinileyo usenza njalo. Enye yezinto ezibaluleke kakhulu ukuba uziqwalasele xa unomdla wokusebenzisa amandla okufunda kukufunda ukulawula umngcipheko.
Ngaphambi kokuba uzibophelele qiniseka ukuba ujonga kuzo zonke izinto zeStormGain ukuqinisekisa ukuba utshintsho luyakulungela wena buqu.
I-Crypto echaziweyo: Imakethi yeNgcali
Njengoko sele siphawulile, uninzi lwee-CFD brokers ngoku zibonelela ngemveliso ye-crypto ethe kratya. Nangona kunjalo, kufuneka kuthiwe iStormGain inikezela ngemigangatho yokhuphiswano. Uninzi lwabarhwebi be-fiat CFD abakwazi ukubonelela ngemida yokuphakama ephezulu, hayi ubuncinci ngenxa yemizimba efana ne-ESMA.
Kulabo abangaziyo, i-UK kunye nabarhwebi base-Yurobhu babekelwe imilinganiselo ephezulu ye-1: 30. Nangona kunjalo, oku akunjalo ngeStormGain. Njengoko besesitshilo, iStormGain ivumela malunga nabani na ukuba avule iakhawunti, ukuba nje lo mntu une-crypto holdings.
Imida yokuNcitshiswa kunye noMgangatho oDibeneyo
Mhlawumbi unoluvo olucacileyo ngoku ukuba ukurhweba kunye nomgangatho kuza nomngcipheko omkhulu kunokusebenzisa nje isikhundla semali. Ngenxa yokuba iStormGain ikuvumela ukuba wenze ii-odolo zomda, ukusebenzisa amandla aphezulu kukhuselekile ngokubonakalayo. Ii-odolo ezimbini ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kweli candelo zi-odolo zenzuzo kunye nee-odolo zokuyeka.
Makhe singene ngakumbi kwinkcukacha nganye.
Ngokusisiseko, ubungakanani buphinda urhwebo lwakho ukuze ukwazi ukugcina isikhundla sakho. Ukukunika umzekelo, ukusebenzisa amandla we-10x kuthetha ukuba uyakwazi ukusebenzisa amaxesha ali-10 isixa semali obukade unaso.
Oku kuthetha ukuba ukuba urhwebo luhamba kakuhle, iinzuzo zakho ziya kuba ngamaxesha angama-10 aphezulu. Umngcipheko uza xa ucinga ukuba awuhambi kakuhle, ilahleko yakho iphakanyisiwe nge-10.
Esi sesinye sezizathu eziphambili zokuba nawuphi na umrhwebi onamava aya kukuxelela ukuba xa usebenzisa ubungakanani kufuneka ubeke i-odolo yokulahleka. Into yokugqibela ofuna ukuyenza kukusebenzisa amandla kwaye uhambe ngaphezulu komda okhoyo kwiakhawunti yakho yorhwebo.
Ngokufumana i-oda yokulahleka kokuma endaweni awunakukhathazeka malunga nelahleko eya ngaphaya koku unokufikelela.
Ukuba izinto zihamba kakuhle xa uthengisa usebenzisa amandla, inzuzo yakho inokuqaqamba kwaye kungekudala inokwakha amandla. Soloko unemva kwengqondo yakho nokuba izinto zihamba kakuhle kuwe, imakethi inokuba bhetyebhetye kakhulu. Ezo nzuzo zingatyiwa zitsho nje ngokuqhwanyaza kweliso.
Thatha inzuzo yi 'ying' yokumisa ilahleko ye 'yang'. Xa uvula urhwebo kuyacetyiswa ukuba ufumane ukuqonda kweliphi inqanaba lenzuzo ekufuneka ujolise kulo. Ke, ukuba ixabiso lakho ekujolise kulo libangelwa, urhwebo lwakho luya kuvalwa ngokuzenzekelayo
Kukho amaqonga ambalwa otshintshiselwano nge-crypto anganikeli ngeodolo yomda. Ukuba ucwangcisa ukusebenzisa amandla, sicebisa ukunqanda loo maqonga njengoko ilahleko yakho inokuphuma ngaphandle kolawulo.
Ndazi njani ukuba i-Crypto echongiweyo iyandilungela?
Njengoko besitshilo, akukho lula ukusebenzisa amandla okunyusa umngcipheko. Yintoni elungileyo yomrhwebi omnye isenokungakulungeli. Nika ingqalelo kwizinto ezimbalwa ngaphambi kokuba ungene kwaye uqale ukurhweba. Oku kufanele ukuba kube njalo nokuba lidume njani iqonga.
Ulawulo lomngcipheko kwiStormGain
Ayinamsebenzi into oyithengisayo, ulawulo lomngcipheko yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu ekufuneka uziqonde kakuhle.
Masicinge ukuba usebenzisa amandla angama-40x. Usebenzisa yonke imali eseleyo kwiakhawunti yakho ukukhusela isikhundla sakho kwintengiso.
Ukuthetha ngokuhanahanisa, iakhawunti yakho ixabisa i-200 USDT. Indawo yakho kule meko iya kuba ne-4,000 USDT.
Nangona kunjalo, i-200 USD yakho ngoku ibekwe nje njengomda. Njengoko le mali ifikelela kwi-2.5% kubungakanani be-odolo yakho iyonke (4,000 USDT), ilahleko eyi-2.5% iya kuphelisa isikhundla sakho.
Ngamagama alula, oku kuthetha ukuba urhwebo luya kuvalwa kwaye uya kulahla umda wakho wonke.
Ngenxa yoku kungasentla, ukuba nesicwangciso sokulawula umngcipheko endaweni esiya kuba yinxalenye ebaluleke kakhulu kumava akho eStormGain. Oku kunjalo ngakumbi ukuba unqwenela ukurhweba usebenzisa amandla.
Umzekelo, nokuba usebenzisa kangakanani, usebenzisa i-odolo yokumisa ilahleko nge-1% uya kuqinisekisa ukuba awulahleki ngaphezulu kwe-1% yesibonda sakho. Ukuba urhwebo lwakho luya kubomvu nge-1%, isikhundla sakho siya kuvalwa ngokuzenzekelayo yiStormGain.
Umyalelo wokulahleka kokuyeka yindlela efanelekileyo yokulawula umngcipheko xa usebenzisa amandla. Soloko uzama ukukhetha amanqanaba aza kukunceda ugcine iakhawunti yakho yomda. Oku kuya kukunceda ugcine amandla akho okurhweba.
'Ukungena ngaphakathi' sisicwangciso esisetyenziselwa ukwenza indawo ebekiweyo. Ke endaweni yokuba usebenzise yonke imali eyinkunzi kwiakhawunti yakho yomda, ungavula enye amancinane isikhundla. Oku kukunika ithuba lokuba ubone ukuba loluphi ulwalathiso kwimakethi.
Ukuba kunokwenzeka ukuba uphazame ngokuqikelela ukuba yeyiphi indlela eya kuthengiswa ngayo yimarike, ilahleko yakho iya kuba ncinane kakhulu xa kuthelekiswa. Oku kubalulekile xa usebenzisa umthengisi ophakamileyo njengeStormGain, ubuncinci kuba uya kuba nakho ukufikelela kwiziphindaphindo ze-200x.
Ewe kunjalo, ukwazi ukuba ingaba iimarike ziya kunyuka okanye ziwe akunakwenzeka. Xa ujonga ii-odolo zelahleko zokumisa, kunokucaca ukuba ubungalunganga malunga nolwalathiso lwentengiso.
Ungajonga indawo yokuqala oyithathayo xa ugoba njengovavanyo lwethiyori yakho yorhwebo. Ke, nokuba ufumana ulwalathiso lwentengiso engalunganga, ngokungena kwindawo encinci ekuqaleni unethuba lokuvavanya i-hypothesis yakho.
Ukuba uvula indawo yakho kwaye ihamba njengoko kulindelwe, unokuhlala ukongeza kuyo. Ekugqibeleni, wNdincoma ukuba ube nesicwangciso sakho sokuthengisa endaweni. Ingumbono olungileyo ukwazi ukuba ungathanda ukongeza kangakanani okanye kuncinci kwisikhundla.
Ungalibali ukusebenzisa ii-odolo zenzuzo nayo, ukuze xa isikhundla esichongiweyo sikwenzela inzuzo yakho itshixiwe.
Uninzi lotshintshiselwano nge-crypto luyila iqonga labo lokuthengisa. I-StormGain ayifani. Njengoko sigubungele izixhobo kunye neemveliso ngaphambili, sele uyazi ukuba oku kuza nezinto ezintle kubarhwebi.
Iqonga leStormGain libekiwe kakuhle kwaye kulula ukulisebenzisa. Kwicala lasekhohlo, uya kubona onke amaxabiso akutshanje. Phakathi, unesixhobo sakho sokurhweba esikhethiweyo. Kwicala lasekunene, uya kubona ibhalansi yakho yewallet.
Ngaphantsi kwetshathi yakho ephambili uza kubona imisebenzi yakho. Ngaphantsi koku, unokubona 'isilinganisi sokujonga', esibonisa ukuthenga nokuthengisa okusebenzayo.
Ukuze wenze urhwebo, kufuneka ucofe nje 'uvule urhwebo olutsha'. Iwindow iya kuthi ivule apho unokufaka khona ukulahleka kunye nokuxhamla njl.
I-StormGain inomsebenzi owahlukileyo kwiqonga layo elakhelwe ngaphakathi 'kwiimpawu zorhwebo'. Uya kwaziswa ngawo nawaphi na amathuba amatsha okurhweba ngokwazisa ngokuzenzekelayo. Oku kuyabulela kubuchwephesha be-AI algo technology.
Nangona ungafikelela kwiinkonzo ze-algo ngewebhusayithi yomntu wesithathu, kwiStormGain kukhululekile ukuba kusetyenziswe. Ngaphezulu koko, uya kufumana iitshathi ezisebenzayo. Izilumkiso zentengiso ziyaxhaswa nazo, ke uya kugcinwa usesikhathini nazo naziphi na iindaba zemali ezinokuchaphazela amashishini akho.
Izixhobo ezinobuchule kubarhwebi abaphambili
Ngaba uluhlobo lomrhwebi othanda ukusebenzisa ubungakanani, kunye nezixhobo eziphezulu? Ukuba kunjalo, iStormGain inezixhobo eziluncedo ngaphakathi kwayo iqonga lokurhweba.
IStromGain ibonelela ngezinto eziphuma kwi-cryptocurrency ezikhuselweyo yi-USDT (Tether). Umane ubeke iiyunithi ezingama-50 zayo nayiphi na imali kwiakhawunti yakho yeStormGain, kwaye emva koko unokusebenzisa amandla naphina ukuya kuthi ga kwi-200x.
Akunakuphikwa ukuba ukusebenzisa amandla kuphakamisa umngcipheko wokulahleka. Kodwa naziphi na izibonelelo ezinokubakho kurhwebo ziya kwandiswa nazo. Idiphozithi eyi- $ 200 inokuthi ihlawulwe kwimpahla yexabiso efikelela kwi-40,000 yeedola.
Akukhuthazwa ukuba usebenzise ngokukhululekileyo, njengoko oku kunokuba lula ukuwa kwabahwebi abangenamava. Xa unolwazi olufanelekileyo lwentengiso kwaye wenze amashishini ambalwa; ke, ngazo zonke iindlela, dabble nge-leverage. Nangona kunjalo, kubaluleke kakhulu ukuba nesicwangciso esomeleleyo solawulo lomngcipheko kwindawo yokuqala ukukunceda ukuba uhlale unyibilikile.
I-StormGain i-Cryptocurrency Wallet: Eyakhelwe ngaphakathi
Itekhnoloji ihamba ngokukhawuleza. Esi sisipaji semali eyahlukeneyo esikhethekileyo kwiqonga leStormGain. Isipaji sikuvumela ukuba utshintshise okanye udlulise imali kwaye ulawule iakhawunti yakho ngokukhuselekileyo ekuhambeni.
Isipaji esibandayo sithathwa njengenye yeendlela ezikhuselekileyo zokugcina ii-cryptocurrensets zakho. Ngokugcinwa okubandayo, imali yakho igcinwe kwaye ifikeleleke ngaphandle kweintanethi, ngakumbi amaqhosha abucala. Isitshixo sangasese silawula indlela eya kwisipaji sakho se-crypto, ekufuneka ihlale ikwi-intanethi.
Isipaji ngasinye kunye nesitshixo siya kuba nobucala kunye noluntu oluphambili:
Isitshixo sangasese: Oku kukuvumela ukuba ufikelele kwiingqekembe zakho xa ufuna ukuzisebenzisa, okanye uzirhoxise kwisipaji sakho.
Isitshixo sikawonke-wonke: Le yeyona 'dilesi' yakho. Xa abantu bethumela iingqekembe kuwe baya kusebenzisa olu lwazi.
Njengoko ubona, kunengqondo ukugcina iimali zakho kugcino olubandayo (ngaphandle kweintanethi). Ukuba ayikho kwi-intanethi uyazi ukuba ayikho kwindawo ebuthathaka xa kuziwa kubagculeli okanye i-malware.
Iindidi zoGcino oluBandayo
Ukugcinwa okubandayo kunokwenziwa ngeendlela ezininzi, kodwa i-crux kukuba nayiphi na into egcinwe ngaphandle kwe-intanethi ingabalwa njengokugcinwa kwebanda. Nazi ezinye iindlela zokwenza oku.
Ukugcina isitshixo sakho sangasese kwi-USB.
Phrinta isitshixo sakho sangasese kwifom yenombolo okanye njengekhowudi yeQR.
Bhala isitshixo sakho sangasese phantsi ephepheni.
Gcina isitshixo sakho sabucala kwisipaji esingaxhunyiwe kwi-intanethi.
Yigcine kwisipaji sehardware.
I-StormGain ikwanazo neenkqubo zokukhusela kunye nokuqinisekiswa kwezinto ezimbini kwindawo. Izipaji ezishushu nezibandayo zibonelela abathengisi ngeyona nto iphambili kwihlabathi. Xa unqwenela ukushenxisa iiasethi zedijithali ngaphandle kwengxaki, unendawo epheleleyo yenkonzo.
6 Imali yeDijithali yemali
Zintandathu izipaji zemali ebandayo kwiqonga leStormGain kwaye zezemali ezibalwe apha ngezantsi:
Imali yokutshintsha Bitcoin Cash (BTH)
Ingxowa ebandayo xa ithelekiswa neWallet eshushu
Sikwenze kwacaca ukuba isipaji esibandayo yeyona ndlela ikhuselekileyo yokugcina imali yakho ye-crypto. Njengokubanda kukuchasene nokushushu emva koko usenokuqikelela ukuba isipaji esishushu yenye yazo is iqhagamshelwe kwi-intanethi. Kodwa umbuzo ngowokuba ngaba isipaji esibandayo sikhuselekile, kutheni ungaze ucinge ngokusebenzisa isipaji esishushu ukugcina i-bitcoin yakho?
Ewe, beka ngale ndlela-umngcipheko ohamba nesipaji esishushu kufanelekile ukuba ikunike lula.
Ukukunika umfanekiso ocacileyo weewallets ezimbini ezichaseneyo eStormGain - nalu uthelekiso olulula:
Uhlobo lwe-Akhawunti: Ukujonga iAkhawunti
Eyona iluncedo: Ukuchitha
Unxibelelwano: Ngaphandle kweintanethi
Uhlobo lwe-akhawunti: Akhawunti yokonga
Eyona iluncedo ekubambeni
Isipaji esishushu siluncedo ekwenzeni uninzi lwazo zonke izinto eziluncedo kwibhanki ekwi-Intanethi sonke esiqhelene nayo. Njengokudlulisa, ukutshintshiselana, ukufaka kunye naluphi na uhlobo lolawulo lwemali ngokwenene. Ungayikhusela isipaji sakho esishushu kwiStormGain ngokubandakanya ukungqinisisa kwezinto ezi-2, iiphini kunye neephasiwedi njl.
Ewe kunjalo, kukho ithuba elincinci lokuba amanyathelo okhuseleko anokungeniswa ngabagculeli kunye nabakhohlisi. Kungenxa yesi sizathu ukuba iStormGain sisebenzise zombini iipaji ezibandayo kunye nezipaji ezishushu.
Inkqubo yeselfowuni ebandayo eStormGain iyafumaneka ukuba uyikhuphele kwiVenkile ye-Apple ye-Apple kunye nakwiGoogle Play Ivenkile yabasebenzisi be-Android.
Ukusebenzisa i-app kwenza ukuba urhwebe, uthenge kwaye utshintshisane ngeemali iiyure ezingama-24 ngosuku kunye neentsuku ezisi-7 ngeveki kwifowuni yakho. Njengoko besesitshilo ngaphambili, uninzi lweengqekembe zakho ziqinisekisiwe ukuba ziya kugcinwa kubanda (ngaphandle kweintanethi) ukukhusela kubagculeli kunye nabenzi bobubi.
Iidipozithi kunye nokurhoxiswa kwemali eStormGain
Uyakwazi ukurhoxisa kwaye ubeke apha usebenzisa ezi zilandelayo:
I-BCH (i-Bitcoin Cash)
Ukubeka okanye ukurhoxisa ngeStormGain, khetha iasethi oyifunayo kwaye ubethe 'thumela' ingxowa kwidilesi yakho yesipaji. Ukuba ufuna ukurhoxisa hit 'receive'.
Ngenye indlela, unokuxhasa ngemali iakhawunti yakho usebenzisa ikhadi lekhredithi kunye nedebhithi. Nangona kunjalo, kufanelekile ukukhumbula ukuba ukufaka le ndlela kuya kukuhlawula. Kungenxa yokuba kukho iifizi zokuqhubekeka ekufuneka ziqwalaselwe.
Ngaba iStrormGain ikhuselekile kwaye ikhuselekile?
Ewe yiyo. Le broker ye-crypto ine-assortment ye-in-exchange eyongezelelweyo yokhuselo, i-encrypted backup backup, kunye nokubonisa okuphakathi. Kananjalo, iStormGain ithathwa njengeqonga elikhuselekileyo lokusebenzisa xa utshintshiselana ngeemali zeedatha.
Njengoko besesitshilo, iStormGain ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokhuseleko kwiakhawunti yakho yokutshintshiselana nge-crypto, esixoxa ngayo apha ngezantsi.
I-2FA: Ukuqinisekiswa kweZinto ezimbini
Ngokufanelekileyo, olu luhlu lokhuselo olongezelelekileyo ecaleni kwephasiwedi yakho. Ke, xa oku kunikwe amandla, kuya kufuneka ufake ikhowudi ye-2FA ethunyelwa kwifowuni yakho xa usenza imisebenzi ephambili yeakhawunti.
I-TOTP: I-password esekwe kwiXesha elinye
I-StormGain isebenzisa i-TOTP yokuqinisekisa izinto ezimbini. Ukubeka ngokulula, kuya kwenziwa ikhowudi enamanani amathandathu kunye neyethutyana. Oku kuya kusetyenziswa kwimizuzwana engama-6 kuphela. Ukuze wenze nantoni na enxulumene neeasethi zakho, kuya kufuneka unikeze le khowudi kunye negama lokugqitha lakho eliqhelekileyo.
Izenzo zokukhahlela ukuqala kwe-2FA kukurhoxiswa kwe-crypto, ukwenza ubumhlophe kwisipaji kunye nokuthumela i-crypto kwabanye abasebenzisi besicelo. I-2FA iyafumaneka kuzo zombini isiQinisekisi sikaGoogle kunye neSMS.
Kwiqonga leStormGain, uya kubona kwakhona 'iingcebiso ezisisiseko zokhuseleko'. Sicinga ukuba oku akuyiyo kuphela uxanduva lweqonga lokubonelela ngale nto kodwa kunceda kubasebenzisi abatsha ukufumana iinyawo zabo.
Enye indawo apho iStormGain isombulula ukhuseleko lweasethi yedijithali kukugcina kwengxowa ebandayo kwii-crypto-wallets. Siza kugubungela izipaji zecrypt ngeenkcukacha ezithe kratya ezantsi kwisikhokelo sethu.
I-StormGain: Ubhaliso olulula
Ngelixa i-KYC (Yazi umThengi wakho) iyinto elungileyo yokurhweba nge-crypto, kufuneka kuthiwe amaqonga ambalwa afanelekileyo kuye kwafuneka ajike abathengi kuba bengakwazi ukuhlangabezana nemigaqo emiselweyo.
Ngale nto ithethwayo, kulula kakhulu ukuvula iakhawunti ngeStromGain. Konke okufuneka ukwenze ukuze uqalise kukuya kwiwebhusayithi yayo uze ufake idilesi ye-imeyile kunye negama lokugqitha elikhethekileyo ukwenza iakhawunti yakho.
Ngoku kufuneka ubeke imali usebenzisa i-cryptocurrency. Emva koko, kuya kufuneka ukwazi ukurhweba ngokunyusa ukuya kuthi ga kwi-200x kwimpahla yakho oyikhethileyo yedijithali.
Ngena kwaye ubambe
Amaxabiso eBitcoin awaweli ngaphantsi kweedola ezi-5k phakathi kwenyanga ka-Epreli noMeyi kunyaka ophelileyo (2019). Khange baphakame kakhulu nokuba (hayi ngaphezulu kwe- $ 5.5k). Masithi uthenge kwiBitcoin nge-5,350 yeedola kwaye wongezwa kweso sikhundla njengoko imarike yayinyuka. Ukubeka ngokulula, inzuzo iya kuba intle kakhulu.
Ewe, akukho ndlela yokwazi i-100% xa iimarike ziya kunyuka. Kodwa enye yezona zinto zibalaseleyo malunga nokusebenzisa indlela yokungena kwiStormGain kukuba ngenxa yokuba iilahleko zakho zincinci, uyakwazi ukubona ngokucacileyo xa intengiso inyuka.
Xa isikhundla sinyuka ngexabiso, isixa sombane esivumelekile ukuba usisebenzise naso siyenyuka. I-StormGain ikwenza ukuba uphindaphinde ukuya kwi-200x ye-akhawunti yakho yenkunzi. Oko kuthetha ukuba kuyo yonke i-1 USDT isikhundla siyenyuka, i-200 ye-USDT eyongezelelweyo inokongezwa kwisikhundla.
I-StormGain vs eToro
Siye safumanisa ukuba iStormGain yindawo yokurhweba exabisa ixesha lakho-nangona kunjalo, ukhe wazijonga ezinye iindlela? Ekugqibeleni, nangona eli qonga liyinxalenye yoMbutho weBlockchain, alilawulwa ngokwenyani.
Ukusuka kumakhulu abanye abarhwebi kwindawo yesehlo, safumana i-eToro yema phakathi kwesihlwele. Ngaphaya koko, iqonga lijonga ngaphezulu kwe-20 yezigidi zabarhwebi kwihlabathi liphela!
Jonga apha ngezantsi uluhlu lwezizathu i-eToro ithandwa kakhulu kwaye ihlonitshwe:
Ummiselo: Ngokungafaniyo neStormGain, i-eToro ilawulwa. Oku kubandakanya iilayisensi ze-FCA (UK), ASIC (Australia), kunye neCySEC (eCyprus). I-FINRA kunye ne-SEC e-US nabo balivumile iqonga. Oku kuthetha ukuba umrhwebi uyazibophelela ekuthobeleni imigaqo nemigaqo ebekiweyo. Zonke zigcina esi sithuba sicocekile kulwaphulo-mthetho.
Izindlela zokuhlawula: I-eToro yamkela iintlobo ezininzi zokuhlawula ezikhawulezayo nezilungele oko. Unokwenza idiphozithi usebenzisa amakhadi etyala kunye namatyala njengeVisa, iVisa Electron, kunye neMasterCard. I-e-wallets ezihambelanayo zibandakanya i-PayPal, i-Skrill, iTrust, kunye neNeteller. Unokusebenzisa nokudluliselwa kwebhanki.
Iqonga loRhwebo loLuntu: Nokuba usaqala, okanye ubazi kakuhle ubugcisa bokurhweba ngeedigital digital-urhwebo lwentlalo lunokubaluleka. Ngokusisiseko, njengakwimidiya yoluntu, 'ungalandela', 'uthanda', 'uphawule', kwaye unxibelelane nabanye abathengisi be-crypto. Oku kunokuba luncedo ekufumaneni ukuqonda kwintengiso oyikhethileyo, ngokuchola ezinye iingcebiso, okanye ngokutshintsha izimvo zesicwangciso.
Ukwahluka kweeasethi: Kukho uluhlu olubanzi lwee-cryptocurrencies zokurhweba kwi-eToro. Okokuqala, unokufikelela kuzo zonke iindlela ezithandwa kakhulu njengeBitcoin, i-Ethereum, iLitecoin, iRipple, kunye neBitcoin Cash. Kukho ezinye iindlela ezinje ngeDogecoin, i-Uniswap, i-Chainlink, iTezos, iZCash, i-TRON, i-IOTA, iCardano, kunye nokunye. Uyakufumana amawaka esitokhwe, iibini ze-forex, ii-ETF, izinto zorhwebo kunye nezalathiso.
Khuphela iNqaku loMrhwebi: Kukho into yokuma apha ebizwa ngokuba yiKopi yoMrhwebi. Ngononophelo khetha iprojekhthi yokutyala imali kuyo- nasiphi na isikhundla abasivulayo okanye abasivalayo siya kuboniswa ngokomlinganiso wotyalo-mali lwakho. Umzekelo, ukuba uMrhwebi weKopi ubeka i-oda yokuthengisa kwi-EOS usebenzisa i-1% ye-equity yabo-i-1% yotyalo-mali lwakho iya kuba mfutshane kwiithokheni ze-EOS. Ukuba uMrhwebi weKopi uvala nge-10% yenzuzo-nawe wenza i-10% inzuzo.
Ipotifoliyo ebonakalayo yasimahla: I-StormGain ibonelela ngesiboniso sasimahla esilayishwe nge-50,000 USDT yeemali zokuthengisa iphepha. I-eToro iya kwelinye inyathelo, ikunikezela ngephothifoliyo yedemo epakishwe nge-US $ 100,000 kwi-equity ebonakalayo. Oku akuphelelwa lixesha kwaye unokutshintsha kwaye utshintshe phakathi kweakhawunti yokwenyani kunye neyenyani nanini na ufuna. Oku kuyenza ukuba ilungele ukucwangciswa kakuhle.
Ukushwankathela, i-eToro inelayisensi epheleleyo kwaye ilawulwa. Umrhwebi ubonelela ngokufikelela kwiimfumba zeemali ezigcina imali, kunye nezinye iindlela zentengiso - zonke ezo ziyi-100% ngaphandle kwekomishini yokurhweba. Ukusasazeka kukhuphiswano kwiimarike ezininzi kwaye ungaqala ngezibonda ezincinci- oku kuvela kwi- $ 25 nje kwiimali zedijithali!
Kukho kuphela inani elincinci labarhwebi be-crypto ababonelela ngesixa esikhulu sokunyusa kubarhwebi be-crypto. Ngokubalulekileyo-ayinamsebenzi ukuba uhlala phi emhlabeni, iStormGain yenza ukuba inkqubo yokubhalisa ibe lula kwaye ingenamthungo.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ngokusebenzisa iStormgain ukuthengisa, ubeka imali yakho oyisebenzele nzima kunye nomrhwebi ongalawulwa.
Kungenxa yoko le nto sikhetha kakhulu i-Capital.com. Ayisiqonga kuphela-eli likhaya labathengi abazizigidi ezingama-20, elilawulwayo- kodwa likuvumela ukuba urhwebe ngamawakawaka easethi ngaphandle kwekhomishini. Kwaye, unokufaka ngokulula kwaye urhoxise imali nge-debit / ikhadi lekhredithi okanye i-Paypal!